Yini ebangela umphumela wokushisa? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kuningi okushiwoyo ngomphumela wokushisa okushisa okushisayo, muva nje njengokungathi kuyinto engeyinhle, okuthile okungasidalela izinkinga eziningi kubantu nakubo bonke abanye abantu abahlala emhlabeni. Kepha siyazi yini ukuthi kubangelwa yini nokuthi kubaluleke kangakanani empilweni?
Ngemuva kwalokho ngizochaza yini futhi yini ebangela umphumela wokushisa ukuze, ngale ndlela, ukwazi ukuqonda kakhudlwana iplanethi esisithintile.
2 Unamiphi imiphumela?
Kuyindlela okwenziwa ngayo lokhu imisebe ekhishwa elangeni imuncwa amagesi abamba ukushisa o I-GHG (umhwamuko wamanzi, i-carbon dioxide, i-methane, i-nitrogen oxide, i-ozone ne-chlorofluorocarbon) itholakala emkhathini futhi ikhanya kuzo zonke izinhlangothi. Eminye yale misebe imuncwa ebusweni bomhlaba, ukuze izinga lokushisa eliphakathi nendawo likhuphuke, livumele impilo ukuthi ibekhona.
Nokho, imisebenzi yabantu iye yaqinisa le nqubo yemvelo, kanjalo kwandisa ukufudumala kwembulunga yonke.
Umphumela wemvelo wokushisa okushisayo uvumele impilo njengoba sazi ukuthi ikhona futhi ithuthuke; Kodwa-ke, njengabantu abagawula amahlathi, basebenzisa izinto zokubasa ezimbiwa phansi, bangcolise futhi, ekugcineni, bangayinakekeli iplanethi, ukuhlushwa kwama-GHG, ikakhulukazi isikhutha, kukhuphuke kuphela.
Ngenxa yalokho, imisebe eyengeziwe ibuyiselwa ngaphezulu, okudala i- ukwanda kwezinga lokushisa elisho, the ukuncibilika kwamakhekheba eqhwa asezindaweni ezibandayo, okungadala ukwanda kolwandle, the kusengaphambili kwehlane , izinguquko ezinkathini zonyaka, futhi izinguquko emaphethini emvula.
Umphumela wokushisa okushisa kakhulu inqubo okufanele ihlale ingokwemvelo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuyeka ukucekela phansi iplanethi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Yini ebangela umphumela wokushisa?
Siyabonga ngokusinikeza ngezihloko eziningi ezithakazelisa kakhulu, ngoba lokhu kuzosisiza ukuba sazi kabanzi ngomonakalo emhlabeni wethu nokunakekelwa nezinyathelo okufanele sizithathe.
UCarolay Pacheco kusho
Kusele ukuchaza izimbangela abazibonayo namuhla 😞😒😣😣😣😣😣😤😤😤😤😤
Phendula uCarolay Pacheco